Madagasikara : Adihevitr’ireo mpiblaogy mikasika ny “fanalan-jaza” sy ny fiadiana hoan’ireo zon’ny vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2008 23:27 GMT
Mandritra ny fety “Saint Valentin,” ilay hetsika manodidina ny fandikana amin'ny teny Malagasy ilay soratra naha-tafintohina ny sasany anefa ankafizin'ny hafa mitondra ny lohateny hoe : The Vagina Monologues | Les Monologues du vagin [izay nezahin'i Jogany nadika ho “Firesakin’ny kitsom-pahafinaretana”] sy ny fitakian'ny Komity mpiaro ny zon'olombelona ny hanavaozan'i Madagasikara ny lalàna manameloka ny fanalan-jaza, dia adihevitra nahamay izay mikasika ny vavy sy ny lahy ao anivon'ny Blaogasyfera.
Andiam-behivavy mpibalogy vitsy, dia ireo namana isany Sipakv, Trinitty, Sipagasy, Ikalakely, Jogany no nihevitra ny hamakiana ny “Firesakin’ny kitsom-pahafinaretana” amin'ny teny Malagasy, ho fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny Andro-V, izay “hetsika iraisan'ny maro an'isa ho fampiatoana ireo herisetra atao ny vehivavy na ny lehibe na ny kely.”
Ireo lehilahy nanoina dia somary kely finoana ihany. “Tandrify ve izany ?” hoy i Rajiosy nanontany [Fr] somary mamazivazy kosa i The Non Required no manontany tena raha tsy ireo lehilahy no tena “iva saranga” [any Madagasikara] :
Tsy latsaky ny 23 ireo hafatra nanoina izany lahatsoratra navoaky The Non Required izany. Ny sasany amin'ireo mpamaky dia nihevitra azy ho “lahy mpanitsakitsaka.” Ny hafa kosa dia nanamarika fa amin'ny ankapobeany dia iva kokoa noho ny saranga misy ny lehilahy no itoeran'ny vehivavy, anefa dia mba misy ihany tombotsoan'ireo vehivavy tsindraindray raha mihoatra amin'ireo lehilahy.
Ny hafatra napetrak'i SipaKV ho valiny anefa, dia milaza fa azo adika amin'ny fomba maro “fiteny mahafatifaty kely, mahalaza ny toetoetrany, sy miharo poezia, izay enti-mampiasa azy, sady manaitaitra” [Fr].
Mialysenfout no namoaka izay hevitra tena lalina sy niadian-kevitra mikasika izay fanalan-jaza.
madagascar.mabulle.com no mitantara izay fomba fanalan-jaza antsokosoko arak'izay fisehony any Antananarivo no sady manolotra tahan'isa mampihoro-koditra :